သင်သည်အစဉ်အသိချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တူပူးပေါင်းဖို့ကမ္ဘာကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားလူမှုအသိုင်း? ကောင်းစွာသင်ကံကောင်းပါစေရောက်နေကတည်းက၊ယနေ့အချိန်တွင်၊ငါခံရဖို့မယ်ပြောနေတာအကြောင်းအရာကိုသင်တို့ထံသို့အခမဲ့အွန်လိုင်းလိင်လိင်ဂိမ်းများနှင့်အပေါငျးတို့သညျအကြီးအပြာဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံများနေကြောင်းသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။ အခုအချိန်မှာ၊အ coronavirus တုပ်ကွေးရောဂါနေဆဲဂျွကမ္ဘာနှင့်အတူမျိုးစုံတိုင်းပြည်အပေါ်အပြည့်အဝလွ lockdown:ကယူတာပဲဆိုရင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကြိုက်အပြင်ဘက်သွား၊ဒါပေမယ့်တစ်ဦးအရွယ်ရောက်စား၊ဒါဟာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်။, အခုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်နားလည်သောအထွေထွေကိုယ္တိုင္အဂိမ်းများအတွက်ပင္ပါကြပြီဆင်းရဲသောသူနောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်:အားလုံးရဲ့အကြောင်းအပြောင်းအလဲမှကျေးဇူးတင်စကားအခမဲ့အွန်လိုင်းလိင်လိင်ဂိမ်းများ။ မြင်၊ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နေတဲ့ပလက်ဖောင်းမှာကြောင်းချုပ်သမားလုပ်တင်ဆက်ဖို့သင်ဖို့အလွန်အကောင်းဆုံးမှာအပြာကားဂိမ္း။ ကျနော်တို့မျှော်လင့်ချက်ကြီးမားတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကျော်အမျိုးအစားနှင့်ပြပွဲကလူရန်ကြွလာသောအခါဤလိုင်းဂိမ်းထုတ်လုပ်၊သင်အမှန်တကယ်လုပ်ဖို့ကိုကြီးစွာသောအလုပ်မယ်ဆိုရင်ခွင့်ရှိသည်။, ငါအလွန်မြင့်မားဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်ခင်ဗျားတက်လက်မှတ်ထိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားလူမှုအသိုင်းဤလက်ငင်း–ပေမဲ့သင်စာဖတ်ခြင်းကိုဆက်လက်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်ငါသင်ပြောပြတံ့သောအရာကိုအကြောင်းပိုမိုရရှိနိုင်မယ့်။
လူတိုင်းအလုပ်လုပ်သောသူသိမှာဆိုတဲ့အတွက်ပေးဆောင်ခြင်းဗီဒီယိုဂိမ်းဟာအလွန်အန္တရာယ်များကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို:အခါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မှာအကြိမ်ကျနော်တို့ခဲ့ကြသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအုပ္ဆုိင္အလားအကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံး။ ဤမဟုတ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုပင်သီးသန့်အရွယ်ရောက်ပြီးလိင်တူဂိမ်းကစားလူမှုအသိုင်း:ရုံအဘယျသို့ကြည့်ယူဖြစ်ခဲ့င့္ထားဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူ၊ဒါကြောင့်အများအပြားခေါင်းစဉ်ကျသွားကောင်းစွာတို၏။, ကျနော်တို့မပြောနိုင်အတိအကျအကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီပျံ့နှံ့ကိစ္စကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်ခဲသင်ပြကြောင်းရဲ့အားလုံးမဟုတ်ကြောင်းခက်ခဲဖန်တီးရန်အလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းများအပေါ်တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာဘတ်ဂျက်နှင့်လူမျိုးကိုချစ်ပြီးကစားချင်တယ်။ ကျနော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်သင်ဒီနေရာမှာအခမဲ့အွန်လိုင်းလိင်လိင်ဂိမ်းများနှင့်အတူပွင့်လင်းလက်နက်နှင့်ချင်တင်ဆက်ဖို့အလွန်အကောင်းဆုံးမှာလိင်တူဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာ။ ၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်၊တက်လက်မှတ်ထိုးရန်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းသည်လုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့:နှောင်ကြိုးမဲ့။, ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်အလွန်အစောပိုင်းအပေါ်ရှောင်ရှားရန်တစ်ဦးကြီးများ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်တော့၊ကျွန်တော်မယုံနိုင်လောက်အောင်မင်္ဂလာအရလဒ်များနှင့်အတူ။ အဘယ်သူမျှမအစီအစဉ်အပေါ်မည်သည့်လမ်ားငါတို့အဘို့အပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့သုံးစွဲခွင့်ပုံစံ:သင်တက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖြစ်ယုံကြည်သောအရာကိုရဲ့အတွင်းပိုင်းသင်တို့အဘို့အစဉ်အမြဲရန်ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါများအတွက်ပေးဆောင်။ လိင်တူဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာတွေအများကြီးပိုပြီးပျော်စရာ–နှင့်အများကြီးလျော့နည်းစျေးကြီးသည်!
ဆိုတော့အရည်အသွေးကောင်းဂရပ်ဖစ်အတွက်ကတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့အလုပ်တခုကို၊ပင်လုံးနှင့်အတူခေတ်မီကိရိယာတွေထွက်ရှိပါတယ်။ ဒီအထူးသဖြင့်အမှုဖြစ်မှကြွလာသောအခါလိင်ဂိမ်းများ၊မဟုတ်ကတည်းကလူအတော်များများနှင့်အတူငွေသားတွေအများကြီးအပေါ်တစ်ဦးစွန့်စားမှုဂိမ်းပလက်ဖောင်းကဒီလို။ ၆၀%ဝန်းကျင်၏ဘတ်ဂျက်အနေနဲ့ဒီအပေါ်အခမဲ့အွန်လိုင်းလိင်လိင်ဂိမ်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ဝင်ဖို့ ၃D ဖော်ရန်အလုပ်အတွက်၊ဂိမ်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့်အခြားအမြင်အာရုံဓာတ်ကျွမ်းကျင်သူများကလုပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုခဲ့ကြလုံးဝစိတ်ကူး။, ငါရိုးသားစွာဖြစ်:ကျနော်တို့စီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်သို့ချော်တော်တော်ထူးခြားတဲ့အခြေအဘယ်မှာရှိလူတိုင်းစစ္ၾစွာအတူတူအရလဒ်များကိုများမှာလုံးဝစိတ်ကူး။ လျှင်သင်အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်အဂတိတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောမြေဖြစ်တော်မူ homoerotic၊ဒီသင်တို့အဘို့အရာ! ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီဆာင္ျအများကြီးဒါခေါ်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်ကိုအလွန်အကောင်းဆုံးအတွက်အမြင်အာရုံအရည်အသွေးကြောင့်ရင်ဆိုင်လိုက်ရအောင်:အဆိုပါဂိမ်းသင်ကဒီနေရာမှာရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ထက်ပိုကြည့်ကောင်းအားလုံးကြွင်းသောအရာ။, ဤသည်အားလုံးနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ကတိကဝတ်အဖြစ်၊ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမနေပါစေအဘယျသို့စက်ကိရိယာအနေအရာကိုအပေါ်ဘယ်လိုအစီအစဉ်မှဝင်ရောက်ခွင့်များ၏စုဆောင်းမှု၏ခေါင်းစဉ်အတွင်း၊သင်ရှိသည်ချင်ရးအပြေးအရာအားလုံးကိုကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ ပါကကျေးဇူးပြုပြီးအားလုံးဂိမ်းလက်ရှိတွင်ရရှိနိုင်သောဖြစ်ကြောင်းထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတာအိမ်-နှင့် ၁၀၀%အဖို့သီးသန့်အဆိုပါစာကြည့်တိုက်မှာအခမဲ့အွန်လိုင်းလိင်လိင်ဂိမ်းများ။ ရိုးရှင်းစွာကိုထား၊ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားကစားဂိမ်းရှိသည်၊အဘယ်သူမျှမကအခြားနေရာအတွက်သင်ဝင်ရောက်ဖို့သူတို့ကိုအွန်လိုင်း။
အခမဲ့အွန်လိုင်းလိင်လိင်ဂိမ်းများရှိပါတယ်အလွန်ကြီးစွာသောအသိုင်းမွာကျွန်တော်ထင်ကြီးများ၏လိင်တူဂိမ်းကစားချစ်ရန်သွားကြသည်။ အရတနာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုအဖက်ဆာဗာကျနော်တို့ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်လည်ပတ်:ဒါဟာလောလောဆယ်တွင်ပတ်ပတ်လည်ရှိပါတယ် ၈၀၀၀ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံထောင်ပေါင်းများစွာ၏သတင်းစကားများနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာအနှံ့ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားသောချက်တင်အခန်းပေါင်း။ သင်သည်တတ်နိုင်အခြားသူတွေကိုစကားပြောတဲ့အကြောင်းချင်းခေါင်းစဉ်၊ဝေစု၊အခန်းကဏ္ဍကို-ကစားနှင့်အတူအခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်တစည်းကိုပိုမိုကြည့်ရှုသောအမှုအရာအားလုံးအမြန်ဦးတည်ကြောလိင်ဂိမ္း dudes။ တော်တော်ချိုမြိန်၊အယ်?, တွဲအဖက်ညီ၊ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ဖိုရမ်အဘို့ရှာကြသည်လျှင်၊တစ်ဦးထက်ပိုသောရိုးရာပွဲလမ်းဆက်သွယ်ဖို့အခြားသူများနှင့်အတူ:သင်ပင်တို့ကနေတဆင့်ဒီအအလတ်စားပူဇော်ဖို့တုံ့ပြန်ချက်နှင့်အကြံပြုချက်များအဖြစ်မှဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုအခမဲ့အွန်လိုင်းလိင်လိင်ဂိမ်းများပင်ပိုကောင်း။ ထို့အပွငျကဆင်းလမ်း၊ငါတို့သည်လည်းအစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းဖို့အပြည့်အဝအောင်မြင်စနစ်အဖြစ်ထိပ်တန်းများအတွက်ဂိမ်းခေါင်းစဉ်ရှိရာကျပါတယ်။ ဆုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ရဲ့အဆုံးမှာလစဉ်လတိုင်းအဘို့အသောသူကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြခံရဖို့အမှန်တကယ်ယှဉ်ပြိုင်ဂိမ်းကစားအားလုံးခေါင်းစဉ်ရှိသည်။
ငါထင်ပြီးပြီဖုံးလွှမ်းရုံလောက်အရာအားလုံးငါအလိုလိုက္၍အခမဲ့အွန်လိုင်းလိင်လိင်ဂိမ်းများ–ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တစည်းဖတ်နှင့်ငါမြော်လင့်သောပေါ်လာသာနှင့်ပူးပေါင်းပြီးနောက်ကျတာထက်။ ဒါဟာစစ်မှန်သည်ကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာ့အတွင်းပိုင်းသင်ချည်နှောင်ဖို့ပတ်ပတ်လည်ကပ်မြင်လျှင်ပြီးနောက်ကိုယ်အဘို့အတွက်ကိုယ့်မိနစ်အနည်းငယ်။ ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီး:လက်ျာဘက်ရှေ့ဆက်ပြီးတက်လက်မှတ်ထိုးဘို့သင့်အခမဲ့အကောင့်ကို–စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးပျော်ရွှင်ဖွယ်ဂိမ်းကစား!